Milamina To Roma Miaraka Amin'ny Trenitalia Trains In 3 Hours | Save A Train
Home > Travel Europe > Milamina To Roma Miaraka Amin'ny Trenitalia Trains In 3 Hours
Milan ho any Roma By Train na Rome any Milan dia mora sy traikefa mahomby. Tsy lazaina intsony ny tarehy! Azonao atao ny maka mora kokoa fiaran-dalamby izay mety maharitra kokoa noho ny 3 ora nefa ny fiaran-dalamby avy ao Milan mankany Roma dia ahafahanao mitsambikina ao ilaina fiatoana mba hijery. Na afaka mitsambikina amin'ny lamasinina Freccia haingam-pandeha Trenitalia ianao, izay maka fotsiny 3 ora sy 3 minitra, farafaharatsiny noho ny dia amin'ny fiaramanidina feno! Na inona na inona hanapahanao ity torolàlana haingana ity dia hanampy anao amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra tsara indrindra ho an'ny tenanao sy ny fitsangatsanganana!
Haingana Ny Zava-Misy:
Lavitra lavitra: 297 kilaometatra
Fotoana haingana indrindra: 3H:03M
Isan'andro fiaran-dalamby: 89
Tapakila fiaran-dalamby ho any Roma manomboka any Roma :$51
Best Train Ticket mpamatsy: Save A Train mazava ho azy
Ity lahatsoratra ity dia nosoratana mba hampianatra momba Train Travel ary Izy no nanaovana Vonjeo ny lamasinina Ny tapakila mora indrindra amin'ny lamasinina Tranonkala eto amin'izao tontolo izao.
Milan To Rome By Train & Rome To Milan By Train: Ny Toerana Tsara Tarehy
Get vonona ny hiaina ny sasany tena miavaka toerana manodidina rehefa mitaingina atsimo amin'ny alalan'ny Italia Lombardy, Emilia Romagna, ary Tuscany faritra. Maro Trenitalia Freccia AV fiaran-dalamby mijanona ao Bologna, Padua na Genoa teny an-dalana ho any Roma. Ny lalana haingana, dia tsy ho ilaina ny hiova fiaran-dalamby. Na izany aza, raha mandeha amin'ny miadana sy tsy lafo vidy fiaran-dalamby-paritra, mety ho ilaina mba hamindra avy amin'ny fifindràna fiarandalamby. Raha toa ianao ka tsy ao anaty zozoro, ary te-hanao indrindra ny Milan any Roma Amin'ny alalan'ny Fiaran-dalamby lavitra, avy eo isika dia fahazoan-dalana izany safidy. Ireto ny zava-nisongadina!
Amin'ny Milan toy ny renivohitra, dia tsy mahagaga raha mpitsidika ondry any ny olona an-tapitrisany Lombardy isan-taona. Fa mihoatra noho ny lamaody amin'ny toerana tena, be dia be kokoa dia tsy maintsy-hitsidika toerana ao amin'ny Lombardy faritra Italia mitomany ny ho avy nitsidika.
Tsy tambo ho isaina ny zavatra atao ao amin'io faritra io; Talanjona sunken fiarovana in farihy tsara tarehy, nitsidika ny lokanga ny atrikasa ao amin'ny tanàna manan-tantara, talanjona tamin'ny kanto sy ny maritrano an'i Mantua - Lombardy dia manangona totohondry ho an'ny mpitsidika.
Tapakila fiaran-dalamby ho any Mantua
Tapakila fiaran-dalamby ao Turin mankany Mantua
Padua to Mantua tapakila fiaran-dalamby
Tapakila fiaran-dalamby ao Mantua
Mino isika Emilia Romagna mifanaraka mora foana ny manintona ny Tuscany malaza kokoa sy Lombardy sy ny tolotra temptingly takatry ny safidy noho ny mihinana ka zavatra ilaina. ny ny Milan any Roma Amin'ny alalan'ny Fiaran-dalamby lavitra tsiambaratelo nafenina tsara indrindra raha ny hevitray, Roma ihany koa mankany Milan amin'ny lamasinina! Mitsambikina eny amin'ny gara sy ny handeha trandrahana!
Bolognia ho Modena Lamasinina
Venice ho Modena Lamasinina
Genoa ho Modena Lamasinina
Florence ho Modena Lamasinina
Maro ny zavatra tokony hatao amin'ny Bologna rehefa mandeha avy Milan ho any Roma miaraka amin'ny Trenitalia Trains. Dia fahazoan-dalana izany ho toy ny iray amin'ireo toerana ambony mba handinika mitsambikina eny amin'ny. Mananika moyen âge tilikambo, boky mahafinaritra sakafo Tours. Raha te-hijanona kely intsony lehibe mahatonga izany fototra ho trandrahana manintona hafa any amin'ny faritra.
Tapakila fiaran-dalamby ao Bologna
Tapakila fiaran-dalamby any Florence mankany Bologna
Roma mankany Bologna fiaran-dalamby
Milan ho ao Bologna fiaran-dalamby
Latsaky ny 30 minitra mitaingina ny fiaran-dalamby haingam-pandeha avy any Venice, Padua dia matetika loatra niraharaha avy ny ankamaroan'ireo mpitsidika. Na izany aza, izany no mahatonga ho iray andro lehibe nankany amin'ny Venise, manolotra ny topimaso ho any an- manan-karena tantara ny tanàna indray mandeha dia mahery Kaominina.
An-trano mba Italia faharoa zokiny indrindra amin'ny anjerimanontolo, naorina in 1222, Padua dia nihazona ny vivacious rivo-piainana ao amin'ny oniversite tanàna, amin'ny velona sy ny piazzas arcaded arabe, betsaka ny trano fisotroana kafe mihidy izay ny ubiquitous Spritz dia de rigueur rivotra toy ny andro any an-paharivan'ny andro. Tandremo sao tsy mahita avy!
Bergamo ho Padua Lamasinina
Fa na iza na iza nandeha ny Milan ho any Roma miaraka amin'ny Trenitalia Trains na ny fomba hafa manodidina ny lalana ary mitady latsa-layered, matetika tsy voalamina, ary matoky tena marina Travel traikefa.
Manoro hevitra anao izahay ho any Genoa (izay toy ny Venise dia indray mandeha isan-mahery maritime repoblika) fronting ny Ligurian Ranomasina. Fanolorana kokoa manta sy ny tena traikefa, hahazo undiluted fahatsapana ny tantara, ary miaina ny kanto kanto eto an-tanàna ary miavaka trano. Ny iray amin'ireo antony lehibe ankafizintsika azy dia izany dia be ny zavakanto sy ny tranombakoka dia uncrowded! Afaka mahita miasa amin'ny Caravaggio, Sur Dyck. Rubens, Durer sy Veronese ao amin'ny Palazzo Bianco sy ny Palazzo Rosso sy ogle hafa ny Taloha izao Tontolo izao sangan'asa maro ny toerana, toy ny Palazzo Reale sy ny Galleria Nazionale di Palazzo Spinola. Misy ihany koa ny tsara ohatra ny Genoese Sekolin'ny kanto, malaza tamin'ny taonjato faha-17, ao amin'ny Palazzo Blanco.
Milan To Roma & Rome To Milan Train Times
Trenitalia haingam-pandeha Haingam-pandeha (AV) fiarandalamby miala Milan Central Station indray mandeha na indroa isaky ny adiny iray ho an'ny Roma Termini toerana - eo ho 90 fiaran-dalamby isan'andro. Ny fiaran-dalamby Trenitalia voalohany ravina Milan Central Station amin'ny 5:00 a.m. Ny farany fiaran-dalamby ho any Roma ravina ao Milan 11:18 p.m.
Mariho fa faran'ny herinandro ary ny fety matetika tsy dia matetika midika asa fanompoana sy fotoana indraindray Travel intsony.
Tapakila fiaran-dalamby ao Milan
Roma ho an'ny tapakila fiaran-dalamby ao Milan
Fankasitrahana eo amin'ny fiarandalamby Freccia eo anelanelan'i Milan <> Roma
Maro Trenitalias Frecciargento AV fiaran-dalamby ho isan'andro dia misy eo Milan sy Roma in fotsiny 3 ora sy 3 minitra, nandeha niakatra ho any 155 kilaometatra / 250 kilaometatra isan'ora.
Tapakilan'ny fiaran-dalamby haingam-pandeha any Italia dia manana fanampiny fanampiny. Fivarotana herinaratra eo amin'ny fipetrahanao mba handefasana fitaovana ary koa WiFi eo ambony fiarandalamby Frecciarossa sy Frecciargento. Na izany aza, hianjera ny famantarana raha ianao ato anaty tonelina ary amin'ny foibem. Afaka manana toeram-pivarotana italiana lehibe ianao amin'ny fiara fitaterana sakafo isaky ny fiaran-dalamby. Ary koa ny sakafo ny hovidiana izay mitondra snacks, mofo voasesika, ary ny zava-pisotro ny seza. Rehefa tapitra ny fiara tsirairay, dia hahita ny trano fivoahana sy be racks mba hitahiry lehibe entana.
Vonona ny hametraka ny kitaponao ary hikaroka ao Milan mankany Roma miaraka amin'ireo lamasinina matanjaka na amin'ny fomba hafa manodidina – Roma mankany Milan amin'ny fiaran-dalamby 3 Hours? Na inona na inona fidinao, Soraty ao anatin'ny minitra vitsy ny tapakilanao fiaran-dalamby Save A Train!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “Milan To Roma Miaraka amin'ny lamasinina Trenitalia” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmilan-rome-train%2F%3Flang%3Dmg – (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)